Akpụ akpụ kọntaktị gị, oku na ndekọ, kalenda, photos, music, videos na ngwa site gị iPhone ma ọ bụ iPad gị ZTE ekwentị dị oké mkpa. Ma a otutu oge usoro pụrụ isi nnọọ ike, ọ bụghị banyere ndị na-ewe oge ọrụ nke na-ebufe ọ bụla otu mpempe data n'otu n'otu. Ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee data gị iOS ngwaọrụ gị ZTE ekwentị, ị ga-aga site a ogologo ndu, eleghị anya kwụsịrị internet na a ga-mgbagwoju anya na-ewe oge.
Ya mere chee echiche otú mfe ọ ga-abụ nyefee data gị iPhone gị ZTE ekwentị na nanị otu click.
Ọhụrụ 1-click data nyefe si Wondershare MobileTrans
Wondershare MobileTrans Bụ ọrụ na-enyere gị aka nyefee niile kọntaktị gị, ederede ozi, oku na ndekọ, photos, kalenda, music na vidiyo si gị iPhone gị ZTE ekwentị na nanị otu click. Wondershare MobileTrans Na-eme ka ọ dị nnọọ mfe n'ihi na ị na-akpali gị niile data mfe na n'enweghị. Nke a na ọrụ ga-arụ ọrụ ọ bụla ekwentị n'agbanyeghị nke netwọk, nyere ị na-eji a PC ka aga na-n'etiti.
O nwere ike ịbụ nnọọ mfe ka mmekọrịta kọntaktị na a ọhụrụ ekwentị karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eji a ọrụ dị ka Google, ma ọ bụ ndị ọzọ niile stof dị ka eserese, vidiyo, ozi ederede na kalenda gị na-esi ike ịkpali gwụla ma i tech savvy. MobileTrans-Eme ka ọ nnọọ mfe, ihe niile ị chọrọ bụ nanị ịwụnye a software ịba uru na mgbe ahụ jikọọ ma ntị ka a PC. Ma igwe ga Otú ọ dị ike jikọọ n'otu oge iji maka ọrụ a na-arụ ọrụ. Nke a pụtara na ị na-apụghị ndabere ọdịnaya si gị iOS ngwaọrụ nyefee na a gasịrị oge. Nsogbu a na-Otú ọ dị negated site na eziokwu na ọ ga-ewe a nnọọ obere oge nyefee niile, otú ọ dịghị mkpa ka ndabere-elu ihe ọ bụla.
Ka anya na otú nyefee data si iPhone ka ZTE iji Wondershare MobileTrans
Otú nyefee data si iPhone ka ZTE iji Wondershare
Nzọụkwụ One: Ina Jikọrọ
Anya isi na ị ibudatara na arụnyere Wondershare gị PC, (e nwere nsụgharị maka ma Windows na Mac), pịa na mmalite button imeghe ekwentị na ekwentị transfer window. Jikọọ gị iPhone na ZTE igwe gị na kọmputa site na eriri cables. Ozugbo i mere ihe a n'ụzọ ziri ezi na Wondershare ka ahụrụ ma ntị, ị ga-ahụ ndị na-esonụ window.
Nzọụkwụ 2: Ka Nyefee Data
Na screenshot n'elu ị ga-achọpụta na ndị niile na data na ike ga-agafere si iPhone gị ZTE ekwentị na depụtara na n'etiti. A na-agụnye ndị dị otú ahụ data dị ka kọntaktị, foto, music, kalenda na ozi. Họrọ niile nke data na ị chọrọ nyefee ka ZTE ekwentị wee pịa on "Malite Copy." All nke data ga-ahụ ga depụtaghachiri ka ZTE ekwentị na a usoro na anya ihe dị ka nke a;
Mgbe ụfọdụ, ọ pụrụ ịdị mkpa ka ndabere gị ZTE data na kọmputa gị. Ị pụrụ ime nke a ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwaga a data gaa na ekwentị ọzọ n'ọdịnihu ma ọ bụ ọ bụrụ na ị ga-achọ ka gị ụbọchị dị nchebe ọnọdụ maka ọdịnihu ohere. Iji ndabere gị iPhone data na kọmputa gị otú i nwere ike bulite ha gị ZTE ekwentị mgbe e mesịrị, eso ndị a.
Họrọ azụ-elu nhọrọ ke gị Wondershare n'ụlọ NchNhr na-emeghe Back-elu panel. Ọ ga-ele anya dị ka nke a;
Site n'ebe a, ọ bụ pụtara mfe, dị nnọọ họrọ niile data ị chọrọ kụziri-elu na Wondershare MobileTrans ga-eme ndị ọzọ.
Ichekwa-elu ekwentị gị data dị oké mkpa ma ọ bụrụ na ị na-aga na-data na ekwentị gị nchebe nakwa dị ka inweta bụrụ na ị hapụ gị na ekwentị. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji weghachi data ekwentị gị, ị na mkpa ime ndị na-esonụ.
Gbaa mbọ hụ na ekwentị gị na jikọọ na kọmputa na iji eriri cables wee họrọ weghachi nhọrọ si gị Home NchNhr. Na ndọpụta ndepụta, ị ga-mkpa họrọ azụ-elu faịlụ Ọkpụkpọ iji. Mgbe ahụ nnọọ pịa Malite Copy iji malite usoro, Wondershare kwesịrị ime ka ndị ọzọ. The weghachi window kwesịrị anya ihe dị ka nke a;
Nke ZTE ngwaọrụ ị na-eji?
ZTE ngwaọrụ na-na-mma; ndị na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime ndị kasị mma ZTE igwe na ahịa. Bụ nke gị otu n'ime ha?
1. The ZTE Sonata 4G: Nke a Android 4.1.2 Smartphone abịa na a 4 anụ ọhịa 800 x 480 TFT ihuenyo. Ọ na-nwere a 5 megapixel igwefoto na a 4GB ebe nchekwa. Ma eleghị anya, ndị kasị adọrọ mmasị mma bụ ya 13-ụbọchị na nọrọ na njikere ndụ batrị.
2. The ZTE ZMax: a phablet-abịa ihe esịtidem ebe nchekwa nke 16GB ma ike na-akwado ruo 32GB site MicroSD. Ọ na-nwere 2 ese foto; a n'ihu 1.6 megapixel na a azụ 8-megapixel.
3. The ZTE ogologo Zinc: a na ekwentị nwere 8GB ikike ncheta na ike-gbasaa 64GB. Ọ na-abịa na a n'ihu ma n'azụ igwefoto nke 1.6 megapixel na 8 megapixel karị.
4. The ZTE Agụba S6: ya kọmpat imewe mere ka a ama a mmasị ọtụtụ ndị. Nke a Android 5.0 Lollipop ekwentị nwere a ebe nchekwa ikike nke 16GB. Ọ na-abịa na a 5 megapixel n'ihu n'ihu igwefoto.
5. The ZTE Ukwu X: Ọ bụ ihe kasị oké ọnụ niile ZTE Smartphones na Qualcomm processor na-agba ọsọ na Android os. Ya esịtidem ebe nchekwa ike bụ 8GB.
6. The ZTE Ukwu S Pro: Nke a ekwentị kasị adọrọ mmasị mma bụ zuru HD n'ihu ihu 2 megapixel igwefoto. Ọ na-nwere a n'azụ igwefoto na a bụ 13 megapixel. Ọ nwere ihe esịtidem ebe nchekwa nke banyere 8GB.
7. The ZTE Speed: Nke a Android 5.0 Lollipop nwere n'azụ 2 megapixel igwefoto na esịtidem ebe nchekwa nke 8GB. Ya batrị na-ekwe nkwa ruo 14 awa nke okwu oge.
8. The ZTE Open C: Nke a na ekwentị na-agba ndị Firefox OS ọ bụ ezie na nke a nwere ike rehashed ka Android 4.4 n'elu ikpo okwu dabere na ihe ị na-ahọrọ. Ọ na-abịa a 4GB esịtidem ebe nchekwa.
9. The ZTE Ụtọ: Nke a Android Jelly agwa Smartphone nwere a 5 megapixel n'azụ igwefoto na a 4GB ikike ncheta.
10. The ZTE Ukwu X Max: onye a na-abịa na a 1 megapixel n'ihu igwefoto na ihe 8 megapixel HD n'azụ igwefoto. Ọ nwere ihe esịtidem ebe nchekwa nke 8GB na a Ram ikike nke 1GB.
> Resource> iOS> otú nyefee Data si iOS ngwaọrụ ZTE ekwentị mkpanaaka na